I-XPERIA mini X10, ukudibana okokuqala ne-Android-Geofumadas
NgoDisemba, 2011 GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala
Kwizicwangciso zeGeofumadas zango-2012 kuvavanyo lwezicelo ze-Android, kuthathelwa ingqalelo ukuba yinto engenakuphikiswa. Siyazi ukuba iApple iyakuhlala ikwindawo entle kwinqanaba leselula kodwa ngokungafaniyo nayo yonke into ejikeleze isangqa esivaliweyo sika-Apple, i-Android iya kuba nokukhula okungaphephekiyo.
Ngoko kwi-2012 siya kukulinganisa oko esinakho kuboniswe nge-iPad, kunye nezicelo ezilinganayo. Ukungqina oku sigqibe kwelokuba siyamkele into yokudlala yakwaNokia esetyenziselwa ukwenza iifowuni ... iphuzu; Ezinye zihlala zibonwa ngenxa yokuba ubungakanani bayo abukhombisi ukuba kukwaziswa, kungekhona ukuhamba okanye ukufunda amaqhinga ngeentaka ezinomsindo.
Sibhekisela kwi-Sonny Ericsson XPERIA mini X10, enegunya lokuba yisistim onokuyenza yonke into ngesandla esisodwa; ukususela kwilizwi ukuya kwinyaniso kukhona aaaalgo of tracho ...
Kwimeko eninzi, indlela yokuhamba kweepaneli kunye ne-personalization yazo ifana ne-iPhone / i-iPad, ngokuqinisekileyo i-zoom ayisebenzi kwindlela efanayo yomzimba (kungekhona kulo, kodwa kwi-HTC); ngoko xa ukhangela iGoogle Maps kufuneka ucofa ngomnye.
Kuhle kakhulu, i-Timescape, isikhala apho iziganeko zingagxininiswa, ezifana nemiyalezo efunyenweyo, iifowuni ezilahlekileyo, i-Twitter okanye i-Facebook izibuyekezo ...
Uncedo, inomathotholo, i-GPS, isekela uxhumano lwe-3G kunye ne-wi-fi ngaphandle kokubuya okukhulu.
Ikhibhodi style oyivileyo ukuba Nokia ukusebenza, nangona ezinye imifuziselo kuzisa qwerty eyenza ulahlekelwa kuyinzuzo mini: ubungakanani bayo, bungakanani awakwenzayo ukufikelela amabhaso uyilo dot ebomvu kunye EISA Awards.
Kodwa esona sizathu esona sizathu sokwenza oko kukuba yindlela yayo yokusebenza yi-Android, ngokusekelwe kwiKernel ye Linux kunye nophuhliso Sikhokelo se Java. Nangona i-Android Inc. yathengwa nguGoogle, ukuyilwa kwe-Open Handset Alliance kuqhayisa ngokulindelweyo.
Ukwahlukana phakathi kwee-Android zokusebenza kunye ne-Apple zokusebenza
Umcimbi unokuba yingxabano kuba abalandeli be-Android bahlala besilwa ulonwabo kwaye abasebenzisi be-Apple banyanisekile. Kodwa ndifuna ukuyazisa ukuba isebenze njengesalathiso xa sisenza uthelekiso phakathi kwezicelo.
Ubuzwilakhe buka-Apple bazalwa kudala kwaye abuzukutshintsha ngokuhamba kwexesha. USteve Jobs akalonyusanga ityala kwaye wavala isangqa ngakumbi. Ke akukho nto iseleyo ngaphandle kokufumana ubunzima kwiimpawu zeApple kwaye wonwabele izibonelelo zayo:
Kubekwe kakuhle, nangona i-iPhone ilungele iliso kwaye i-iPad yabuzwa, iphumelele kwimarike ngesabelo esibalulekileyo.
izicelo Up kuphela emva kokuba ezivavanyiweyo kwinqanaba elithile stringency, ngoko izixhobo zikwinqanaba ngokuqhelekileyo ezilungileyo lokhuseleko kunye nokusebenza yaxabisa ngaphezulu okanye ngaphantsi 3 iidola kunokuba ngaphantsi.
Ayikho enye indlela yokuzifaka, ngaphandle kweakhawunti ye-iTunes okanye ngokuthe ngqo kwivenkile ye-Apple. Kuvaliwe, kuyinyani, kodwa yile nto ibazuzileyo ukuba bangabinakho ukuba lula kwaye bagcine inkqubo yokusebenza ingasebenzi.
Nabani na oya kwenza isicelo se-mac kufuneka ahlawule imali eyilwayo yonyaka eyi-US $ 100 hayi ukuyilayisha kuphela kodwa ukuyigcina iphila. Ijongeka njengenkunzi zamanye amaxesha, kodwa iyasebenza; Izigidi ezili-14 ze-iPads ezithengiswa ngo-2010 ziqinisekisa imodeli enenzuzo, ngakumbi kuba umsebenzisi we-Apple esetyenziselwa ukuhlawula, hayi ukubiwa.
Kule meko, usetyenziso lwe-Android luvulekile ngakumbi, lunokwenziwa ngokungqongqo kancinci, kodwa ngesizathu esifanayo kuqhelekile ukufumana amawaka angasebenziyo okanye asetyenziselwa yonke into ngaphandle kwezinto ezinemveliso. Ke isiphithiphithi asilungelanga nokuba, kwenzeka ntoni kukuba ukukhula kwaso kukuba iAmdrpod ibe yiWindows elandelayo!Yeka indlela ezimbi ngayo! kodwa ngokuqinisekileyo iya kukhula ekuthandeni. UGoogle uyakwazi oko kwaye yiyo loo nto ukubheja ekufeni (okwethu, hayi okwabo); Nangona kunjalo, kuthatha ixesha kunye nokusesikweni ukuba amashishini azinze xa kungazinzanga simahla.
Kuya kukhula ekuthandeni, inkululeko iya kufa (musa ukuyivula)
Kuvulekileyo kwaye ngoko ke zonke iinkampani ziya kubheja, kungekhona kuphela ekuphuhlisweni kodwa kwintengiso.
Ukuhlawulwa kwezicelo kuya kukhula kwaye kuqhubeke kusinda ubugqirha; Kwakhona kulindeleke ukuba ubuthathaka bokungabikho bonke abakhweli beenkampani ezisezantsi kwinguqu yenkqubo yokusebenza iza kusombulula kwi-4.0 version (Ice Cream Sandwich)
Okwangoku ndikhuphele ezimbalwa zicelo, kwaye ngokubona umyalezo we «Asithatha uxanduva lomonakalo onokubangela»Ndivile uvakalelwa nje Ngobusuku abagrogrisi baseFarabundo Martí bafika befuna utata, ngentsimbi yesithathu ekuseni, bephethe ii-ocotes zabo ezivuthayo kunye nemipu yokuzingela ethathwe kwalapha. Imilenze yam yangcangcazela, ngelixa indoda eyayingumphathi wale hacienda yayihambahamba endlwini, inomsindo ngokungamfumani ... kwiminyaka eli-13 kamva ndamfumana ekhubazekile e-hammock, ekhathazekile kukungaqondi ukuba kuthetha ukuthini uguquko, ndamsizela kwaye nangaphezulu amathole ayo angcangcazela.
Kuvakalelwa kukuba akuqinisekanga, ngokuqinisekileyo kuthatha ngaphantsi kweminyaka eyi-13 ukufunda indlela yokulwa neengxaki ze-Android system, andiyi kulahlekelwa amalungu entsapho kwimfazwe kwaye ...
... i-XPERIA mini iyasebenza ngokwenene
Post edlulileyo«Ngaphambilini IPhepha.li yenza elakho iphepha ledijithali
Post Next UTM idibanisa igridi usebenzisa i-CivilCADOkulandelayo »
6 uphendula "XPERIA mini X10, ukuhlangana okokuqala ne-Android"
Andithandabuzi ukuba i-Android liqonga elihle, kodwa yisoftware ... kuxhomekeke kwizixhobo ozisebenzisayo ukonwabela oko.
Kulungile, kuya kufuneka ukhangele ... ukuza kuthi ga ngoku kunzima kum ukufumana isixhobo esinjenge-GISPro, iBalanced Scorecard okanye iWoopra kwi-Android.
Inyani yile, ibhetri iyaxinzelela. Kuyimfuneko ukuyicima i-GPS kwaye ngaphandle kwamacingo ukuba ayizukusetyenziswa, kunye nokuthoba ukukhanya kwaye kuthintele iinkqubo ezingafunekiyo ukuba zibaleke.
lucho gatica uthi:
Uphelelwe lixesha, kwaye ngaphandle kokugxila, bendicinga ukuba la magqabantshintshi avela ku-2009, kunokwenzeka njani ukuba la magqabantshintshi xa i-android ibisemarikeni ngaphezulu kweminyaka emi-3, awazi. Yonke le nto ixhomekeke kwinto yokuba i-android yi-iphone "yasimahla", ukuba iyinyani, iyatyeba, i-0,001% inovakalelo ngaphandle kwebala, kodwa izixhobo zayo zingama-400% ngaphezulu kwiimodeli ze-slim ezincinci, kodwa ndingayifumana i-80% ngayo I-10% yexabiso le-iphone endinokuphila ngayo. Izicelo ziyafana nazo zonke kodwa zikhululekile kwaye ziphuculwe, ewe kuya kufuneka ukhangele xa une-200.000 ongakhetha kuyo into oyifunayo, kwinto ethile i-Apple c ... uloyiko kwiminyaka emibini luphelile, ndigqibile ngeNokia.
Ukukhetha okulungileyo, ndinayo i-Xperia X8 kunye ne-mole kuphela eyona nto ndiyibonayo (i-Au engicinga ukuba iyinto evamile kuma-smartphones) ubude bhetri.
Ngaba akufanele kube yi-XPERIA?